Fampivoarana federaly federaly sy fanjakana & Hemp - Vaovao fanaovan-tsaramaso
Vaovao Fanaparitahana Ara-dalàna - Alarobia @ 2:00 hariva CST
Vaovao ara-dalàna cannabis
Raha mitady ho aiza ianao no hahita Vaovao ara-dalàna cannabis - Tonga amin'ny toerana mety ianao!
Noho ny asa ho an'ny fahefana avo, ny tantara ary izay rehetra tsara eto amin'izao tontolo izao, ny mpisolovava izay nanomboka ity tranokala ity dia nametraka ny taonany ny fahaizany momba ny lalàna momba ny raharaham-barotra mba hamolavolana ny hadisoana teo amin'ny tantara rehefa nitarika ny heloka bevava.
Nanomboka ny fantsona YouTube, Cannabis Legalization News, izy tamin'ny taona 2018, niaraka tamin'ity tranonkala ity sy ny fanaovany lalàna. Ka ny volana vitsivitsy voalohany dia saro-pantarina - saingy ankehitriny miaraka amin'ny mpanjifa sy ny mpihaino azy dia mitombo haingana izy io - angamba satria manome anao zavatra andrasana isan-kerinandro.
Isaky ny Alarobia amin'ny 2 ora tolakandro, Central Law, Lawner, Tom ary mpanao gazety avy any WeedNews.Co, Miggy, miara-mivory hiresaka momba ny herinandro ao Vaovao ara-dalàna cannabis. Miarahaba ireo mpikambana ao amin'ny indstury rongony ara-dalàna hiresaka momba ny orinasany sy ny fanovana mpanao lalàna ilaina mba hamahana ny politika ratsy am-polony taonany. Andao hiresaka bebe kokoa - fa kosa aloha…
Contact ny Mpisolovava cannabis
Raha te hamboly hemp ianao any Illinois dia fenoy eto amin'ity tranonkala ity ilay bot na chat - na antsoy ny mpisolovava rongony aminay anio (309) 740-4033
Vaovao farany ara-dalàna
Isika isan-kerinandro dia hitantsika indray izay nihena teo amin'ny tantaran'ny famaranana ny fandraràn'ny cannabis izay niteraka fahavoazana bebe kokoa noho ny tsara nandritra ireo 80 taona lasa.
Famahanana mivantana isaky ny Alarobia amin'ny 2:00 tolakandro - ora afovoany. Jereo izany mivantana ary apetraho ny fanontanianao na lazao ny hevitrao. Tsy mivoaka mivantana amin'ny YouTube fotsiny izy io, fa amin'ny Facebook ihany koa. Ity no fomba ahafahanao misambotra azy mora foana:
Misoratra anarana eto:
Na toa anay ato amin'ny Facebook ary hijery azy io mivantana eo:
Na mety ilainao ny dikanteny PodCast:
Izay no ara-bakiteny tokony hataonao hijerena ny fanaovana ara-dalàna azy ireo isan-kerinandro. Nahazo ny fotoana hijerena ny tantara ianao - ary hanampy azy io amin'ny fidirana amin'ny fanovana mpanao lalàna. Fa inona no azonao antenaina amin'ny famandrihana anao - izay maimaim-poana aorian'izany - amin'ny Cannabis Legalization News?
Volavolan-dalàna fanao ara-dalàna federaly 2019
Ho fanampin'ny feed news isan-kerinandro, ny mpisolovava ny rongony dia manao YouTubes mahazatra amin'ny lalàna sy politika rongony. Indrindra amin'ny sehatra federaly.
Ireto misy vitsivitsy amin'ireo nataony:
ny lalàna STATES
Lalàna momba ny marijuana amin'ny taona 2019
Ny 420 dia miharihary fa karohina maherin'ny 200 isam-bolana - ary raha nitady an'io fe-potoana io ianao ary niafara teto - dia tongasoa, faly mahita anao.
Ny asanay eto dia ny mahazo antoka fa mahazo ny vaovaonao 420 ianao - heverinay fa "fluff" kokoa ity vaovao ity noho ny tena vaovao sy ny famakafakana momba ny fanovana ny lalàna rongony any Etazonia sy manerantany.
Vaovao 420 dia manondro ny lafiny mahafinaritra kokoa amin'ny vaovao rongony. Indraindray isika dia miresaka momba ny fahafinaretan'ny lalàna mifehy. Manamboara fivarotana rongony izay maniry sy manompo ny besinimaro.
Ny fifaninanana cannabis izay misy ao dia manondro izay tery tsara indrindra.
Zavatra tsara, nefa tsy manandanja loatra toy izay mitranga hanampiana amin'ny fanovana lalàna izay nandratra olona marobe, saingy tsy nisy namonjy. Vaovao 420 izany.
Mahafinaritra ny manana satria mampiseho ny lafiny maivana amin'ny zavatra ezahintsika hatao izy io, fa ny ankamaroan'ny votoatinay dia ny fanovana ny lalàna sy ny orinasa any amin'ny indostrian'ny rongony ary ny fomba ataon'izy ireo manatsara ny fiainana sy ny lalàna manerana Amerika, ary na dia izao tontolo izao aza.
Misehoa amin'ny Vaovao Legalization Cannabis
Raha ao amin'ny indostrian'ny rongony ianao dia tianay ny miresaka aminao. Ndao hiresaka. Araho aho ao amin'ny Linked'in
Na ampiasao ny iray amin'ireo bokotra fifandraisana na antso an'ity tranonkala ity mba hifandraisana - ary angamba hataonay ianao -
Vaovao momba ny fanaratsiana cannabis!
Raha tianao ity atiny ity, na mahalala olona mety hahaliana azy, azafady mba zarao.
Fahazoan-dàlana Marijuana ampiasain'ny olon-dehibe Montana
by Diego | Enga anie 21, 2021 | Uncategorized
Fahazoan-dalàna momba ny rongony any Montana Vao natao sonia ho lalàna ny HB 701. Ny governoran'i Montana Greg Gianforte dia nanao sonia politika ho lalàna momba ny fomba hifehy sy handoa hetra amin'ny rongony any amin'ny fanjakana taorian'ny antsasaky ny mpifidy nankato ny fananganana ganja ho an'ny olon-dehibe 21 ...
Mila mpisolovava rongony?
[contact-form-7 id = ”222210 ″ lohateny =” endrika mahazatra-footer ”]